Ikhaya likanokusho Lazo Zonke izinkathi zonyaka, Igumbi le-AC Super Deluxe
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-Ranjana
Leli gumbi elihle ngokumangalisayo futhi elibanzi (265 sq ft) elinephansi lemabula kanye negumbi lokugezela le-en-suite.
Isitezi sesibili sifinyeleleka nge-lift/elevator.
Ikhaya lethu liyi-bungalow enhle, enezitezi ezi-3 enezindawo eziningi eziluhlaza. Izindawo zokuhlala zinomoya futhi zivulekele ukukhanya ngamawindi amakhulu (ngaphandle kwegumbi elingu-1 elinokukhanya kwesibhakabhaka). Amakamelo okulala ezivakashi, anephansi lemabula, ikakhulukazi esitezi sokuqala nesesibili.
Amakamelo nezindawo ezijwayelekile zihlotshiswe ngobuhle. Igumbi ngalinye linomhlobiso oyingqayizivele.
Izivakashi zizojabulela izingadi ezinhle zangaphambili nangemuva. Ileveli engu-3, ithala eliluhlaza okwamanje lifinyeleleka ezivakashini ngaphandle uma kuqhubeka iphathi yangasese. Kunama-pantries amancane ku-1st kanye ne-2nd floor anefriji, isihlungi samanzi nezitsha.
Sihlala emagcekeni futhi sitholakalela ukusebenzelana.
4.93(199 okushiwo abanye)
* Inqaba encane yasendulo phakathi kwama-200 mtrs.
* Izindawo zokudlela eziningi nezindawo zokudlela ezinhle ngaphakathi kwebanga lokuhamba
* Isitolo sokudla - 200 amamitha
* Izikhungo zokuthenga nge-3-4 Kms. I-Tuk-tuk itholakala ebangeni lokuhamba ngezinyawo.
* Isikhungo sedolobha siqhele ngamakhilomitha angu-4
* Isiteshi samabhasi singama-2 km cishe imizuzu emi-5
* Isiteshi sikaloliwe i-1.2 km cishe imizuzu emi-5.
Sihlala endaweni eyodwa. Sihlanganyela nezihambeli ngesikhathi sasekuseni nakumadina.
URanjana Ungumbungazi ovelele